Hulu विद्यार्थी छूट | Spotify प्रीमियमको साथ (२०२०) - मनोरञ्जन
Hulu प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो जुन किफायती मूल्यहरूमा गुणवत्ता मनोरन्जनको अनुभव लिन चाहन्छ। साइट यसको विशाल पुस्तकालयको लागि परिचित छ र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई प्रस्ताव गर्न धेरै सामग्रीहरू छन्। तपाईं चाँडै चिन्तित नहुनु भएको केही मनपर्ने कार्यक्रमहरू हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीको छुट योजनाले युवा विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूको पैसाबाट अधिकतम लाभ लिन चाहान्छन्। विद्यार्थी जो आफ्नो किशोर र बीस मा छ मुश्किलले नै वित्तीय ह्यान्डल गर्न सक्षम छन्।
एक छात्र छुट वित्तीयको तनाव कम गर्न एक उत्तम तरिका हुन सक्छ। यस योजनाको साथ आज तपाइँको मनोरन्जनको लागि कम तिर्न सुरु गर्नुहोस्। यस गाईडमा, हामी ती तरिकाहरू प्रयोग गर्दछौं जुन तपाईं आफ्नो सदस्यता कम गर्न सक्नुहुनेछ।
Hulu विद्यार्थी छूट - संक्षिप्त जानकारी
Hulu र Spotify सँगै साझेदारी छ विद्यार्थीहरूलाई थप लाभहरू प्रदान गर्न। अब तपाइँ एक सदस्यता संग संगीत र भिडियो मनोरन्जन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंको वित्त बचत गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं सचेत हुनुहुन्न भने, Spotify एक आवश्यक अनलाइन संगीत स्ट्रिमि service सेवा हो। प्रयोगकर्ताहरूले Spotify प्रीमियम, Hulu (विज्ञापन समर्थित), र शोटाइम सबै एक छाता अन्तर्गत पहुँच प्राप्त गर्दछ। यो पैसा बचत गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि यो एक समझदार वित्तीय समाधान हो। हामी यसलाई हाम्रा सबै पाठकहरूलाई सिफारिस गर्दछौं जसले अधिक प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
यो सदस्यता को बारे मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि तपाईं तीन महिना को लागि यो सबै नि: शुल्क हो। समग्रमा विद्यार्थी छुट छुट प्रयोग गर्न कुनै वास्तविक कमी छ। तपाइँ तीन सदस्यता संग अन्तहीन मनोरन्जन को लागी पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
Hulu विद्यार्थी छूट को मूल्य:
विद्यार्थी छुट छिटो मनोरन्जन को लागत कम गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले एक भन्दा कमको मूल्यको लागि तीन सेवाहरूको मज्जा लिन सक्छन्। सबै भन्दा राम्रो पक्ष पहिलो तीन महिना एक परीक्षण अवधि हो। यस समयमा तपाईलाई केहि पनि चार्ज गरिने छैन। यो तपाइँको मनोरन्जन खर्च मा पैसा बचत गर्न एक उत्तम तरिका हो। सबै तीन सेवाहरू तीन महिना पछि $ 4.99 + करको लागि उपलब्ध छन्। आजका दिन त्यहाँ इन्टरनेटमा बहु स्ट्रिमिंग साइटहरू छन्। यदि तपाईंले प्रत्येक पालो खरीद गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईं वालेटमा ठूलो तनावको साथ समाप्त हुनुहुनेछ।
कसरी एक Hulu विद्यार्थी छुट छ?
Hulu विद्यार्थी छूट जो आफ्नो नगद बचत गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि अपेक्षाकृत सजिलो छ। तपाईं सट्टा बचत गरिएको पैसा कतै खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। अझ धेरै बचत गर्ने उत्तम तरिका केहि साथीहरू बीच बिल विभाजन गरेर हो। धेरै उपकरणहरूमा Hulu प्रयोग गर्न धेरै प्रतिबन्धहरू छन्। छुट छुट सक्षम पार्नका लागि यहाँ चरणहरू छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको कम्प्युटरमा ब्राउजर सुरू गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थी छूट Spotify आधिकारिक साइट बाट उपलब्ध छ। Hulu साइटसँग उनीहरूको बन्डल योजनाको सदस्यता लिन कुनै प्रावधान छैन। तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् - https://www.spotify.com/us/student/ । यसले तपाईंलाई विद्यार्थी बन्डल पृष्ठमा लैजान्छ।
गृह पृष्ठमा तपाईले 'तीन महिना निःशुल्क पाउनुहोस्' बटन पाउनुहुनेछ। दर्ता प्रक्रियाको साथ सुरू गर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूले प्लेटफर्ममा एक नयाँ खाताको साथ साइन अप गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रियाको साथ सुरू गर्ने एक उत्तम तरिका हो।
प्रयोगकर्ताहरूले अवस्थित Spotify खातामा लग इन गर्न वा नयाँ सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंसँग फेसबुक वा एप्पल आईडी जस्तै तपाईंको सोशल मिडिया ह्यान्डलहरू प्रयोग गरेर लगईन गर्ने मौका छ। यदि तपाईंसँग खाता छैन भने 'स्पोटिफाइका लागि साइन अप' बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले प्लेटफर्ममा खाता खोल्नु भएपछि, तपाईले विद्यार्थी छुट पाउन सक्नुहुन्छ। Spotify एक प्रमाणिकरण प्रणाली को उपयोग पुष्टि गर्छ यदि तपाईं एक सक्रिय विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तपाईंको कलेजमा निर्भरता प्रमाणीकरण प्रक्रिया केहि घण्टा लिन्छ। यदि उनीहरू कुनै समस्याको सामना गर्दै छन् भने प्रयोगकर्ताहरूले म्यानुअल रूपमा पनि उनीहरूको कलेज नामांकन प्रमाणित गर्न सक्दछन्।
एक पटक खाता सफलतापूर्वक प्रमाणित भयो, प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो भुक्तानी गर्न सक्छन्। Spotify र Hulu क्रेडिट र डेबिट कार्ड मार्फत भुक्तानी स्वीकार। तपाइँ तिनीहरूको सेवाहरूको लागि साइन अप गर्न पनि Paypal प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी दिनहरूमा गुणवत्ता मनोरन्जन अनलाइन प्राप्त गर्नका लागि यो उत्तम तरिका हो। भुक्तानी गर्नुहोस् र सहजै हुलू प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। राशि पछि सहयोगी हुनेछ। Month 4.99 रकम तीन महिना परीक्षण अवधि पछि कटौती हुनेछ।
बधाई छ! तपाइँ सफलतापूर्वक तपाइँको खाता मा Hulu विद्यार्थी छुट छ। प्रयोगकर्ताहरूले Spotify सेटिंग्सबाट Hulu खाता सक्रिय गर्न सक्दछन्। उही संस्करण अब सबै प्लेटफार्महरूमा काम गर्न सक्दछ।
Hulu विद्यार्थी छुटलाई म्यानुअल तरीकाले कसरी प्रमाणित गर्ने?
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रमाणिकरण त्रुटि सामना गर्नुपर्‍यो। प्रीमियम सदस्यता छिटो प्रशोधन हुने सुनिश्चित गर्न स्पोटिफाइले एक स्वचालित उपकरण प्रयोग गर्दछ। म्यानुअल प्रमाणिकरण मोड प्रमाणिकरण गर्न नसक्ने मानिसहरूका लागि पनि उपयोगी छ। यहाँ तपाइँ तपाइँको कलेज वा विश्वविद्यालय को बारे मा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ। समग्र स्पोटिफाई वेबसाइटले पुष्टि गर्दछ यदि तपाईं एक सक्रिय कोर्स मा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ वा छैन भने। यो प्राय जसो अमेरिकी कलेजहरूको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ। Hulu ले पनि यसको विद्यार्थी उपभोक्ताहरूको लागि समान प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ। तपाईको कलेज प्रवेशका लागि कागजातहरू पेश गर्न आवश्यक छ।
एक साधारण कलेज आईडी कार्ड काम पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनको साथ चित्र क्लिक गर्न र म्यानुअल प्रमाणिकरणको लागि प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्दछन्।
विद्यार्थी छुट कति लामो हुन्छ?
Hulu र Spotify विद्यार्थी छुट 30 जुन 2020 प्रयोगकर्ताको लागि उपलब्ध छ। तपाईंले आफ्नो वृत्तिमा कार्य गर्नु पर्छ र सदस्यता लिनु पर्छ आज। कहिले थाहा हुँदैन कहिले ढिलो हुन्छ। प्रस्ताव अनलाइन धेरै समय खर्च गर्ने मानिसहरूका लागि जीवनको अवसरमा एक पटक हो। एकचोटि तपाईले छुटका लागि साइन अप गर्नुभयो, तपाईले एक बर्षको लागि यसको फाईदा लिन सक्नुहुनेछ। पहिलो तीन महिना नि: शुल्क छन्। परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि, प्रयोगकर्ताहरूले अर्को नौ महिनाको लागि सदस्यताको लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
छुटको लागि को योग्य छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने जो कोही विद्यार्थीको योजनामा ​​सामेल हुन सक्छन्। प्रयोगकर्ताहरू SheerID प्रणाली प्रयोग गरेर स्वचालित रूपमा प्रमाणित हुन्छन्। SheerID एक विद्यार्थी भर्ना डाटाबेस हो कि धेरै शैक्षिक संस्थानहरु संग जोड्दछ। तिनीहरूले साइटको लागि प्रमाणिकरण प्रक्रिया तत्काल बनाउँदछ। उनीहरूसँग अन्य पहिचान सेवाहरू छन्, जस्तै सेना, नर्सहरू, र चिकित्सकहरू। डाटाबेस ज्यादै ठूलो छ, त्यसैले तपाई आफैले प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ सजीलै सजिलैसँग
Hulu दुनिया भर मा मान्छे को लागी एक महान मनोरञ्जन मंच हो। धेरै पाठक विद्यार्थी छूट योजना को बारे मा शंका हुन सक्छ। यस गाईडमा, हामी तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन आशा गर्दछौं। किफायती मूल्यमा आज आफ्ना सबै उपकरणहरूमा उच्च-गुणवत्ता सामग्री स्ट्रिमिंगको मजा लिनुहोस्।
अमेजन प्राइम स्टुडेन्ट डिस्काउंट (२०२०)
डिस्ने प्लस विद्यार्थी छुट कसरी पाउने?
विन्डोजहरूको लागि गुगल गृह अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो साइटहरू नि: शुल्क टिभी कार्यक्रमहरू स्ट्रिम गर्न
के जीवन अनौंठो डरलाग्दो छ
नि: शुल्क PSN कोडहरू जेनेरेटर छैनन्
पीसी को लागी एक एन्ड्रोइड इमुलेटर के हो?
फिल्महरू र टिभी कार्यक्रमहरू नि: शुल्क अनलाइन हेर्नुहोस्